ဘိလပ်မြေ Mason ပြီးတော့ကွန်ကရစ် Finish ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty Template ကို - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ဘိလပ်မြေ Mason ပြီးတော့ကွန်ကရစ် Finish ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty Template ကို
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized2မှတ်ချက်များ 2,187 views
Hard forecasts in order to complete tangible, ခြစ်ပစ်, and work large areas, side, and processor, လက် tools တွေကိုအလုပ်သမား, strength mills, or air chisels.
Assemble mildew that are timber, and secure molds around place to become repaired, လက် tools တွေသုံးပြီး.
Fabricate sections, အကြံပေးချက်များ, and concrete supports.
Mixture to produce grout, or slurry, using trowel, tinker, ခြစ်ပစ်, or concrete-combining equipment.
Active Listening-To what other-people are saying offering complete attention,, getting time for you to realize the items being manufactured, စံပြအဖြစ်မေးမြန်းကိစ္စများ, မှားဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing မဟုတ်.
အခြားသူများအားဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း - သတင်းအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူမျှဝေရန်.
Thinking that is critical-Applying reason and thinking to recognize the advantages and disadvantages of alternative solutions, ပြဿနာများမှစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု.
Checking-CheckingPERDetermining effectiveness of additional persons, မိမိကိုယ်ကို, or companies take remedial action or to produce improvements.
Operation Tracking-Viewing different signals, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုကိရိယာမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နေသည်သေချာဖြစ်.
Quality Control Analysis-Executing assessments and checks of goods, ပံ့ပိုးပေး, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်သို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
Analysis-Determining howasystem must perform and the way improvements in functions, အခြေအနေများ, and also the surroundings will impact effects.
Time Management-Managing one’s personal occasion as well as others’ အချိန်.
Management of Savings-Determining how cash will undoubtedly be spent to get the task accomplished, ဤကုန်ကျစရိတ်များအတွက်စာရင်းကိုင်.
Operations of Material Resources-Receiving and seeing for the correct usage of amenities, tools တွေ, နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်ထုတ်ကုန်လည်ပတ်.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2019 တွင် 11:52 ညနေ
မေ 1, 2019 တွင် 7:09 ညနေ